Andrés Iniesta Oo Dhaawac Ku Seegi Kara Kulankiisii Ugu Dambeeyay El Clásico – Gool FM
(Barcelona) 03 May 2018. Wargeyska caanka ah ee reer Spain “Mundo Deportivo” ayaa sheegay in kabtanka kooxda Barcelona Andrés Iniesta uu maanta ka maqnaa tababarka guud ee kooxda Blugarana, kadib markii uu si gooni u sameeyay tababar fudud.
Jamaahiirta iyo maamulka kooxda Barcelona ayaa waxay durbaba bilaaween in walaac xoogan ay ka muujiyaan xaalada kabtan Andrés Iniesta iyagoo ka cabsi qaba inuu seego kulanka ugu xiisaha iyo xamaasada badan heer kooxeed ee El Clásico.
Andrés Iniesta ayaan ka qeyb qaadan tababarkii uu maanta bixiyay tababare Ernesto Valverde ay Barcelona ugu diyaar garoobeesay kulanka El Clásico ee Real Madrid.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Andrés Iniesta uu qabo dhaawac dhanka muruqa ah, 33 jirkan ayaa doonaya inuu ka qeyb galo kulanka gaarka u ah ee El Clásico maadaama uu u noqonayo kiisii ugu dambeeyay uu kala qeyb gali doono kooxda Barcelona.
Andrés Iniesta ayaa dhawaan wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka tagayo garoonka Cump Nou dhamaadka xili ciyaareedkan, kadib mudo dhan 22 sano uu kusoo sugnaa, waxaana xidigan si weyn lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi doono horyaalka dalka Shiinaha.